Ngalaba Aha Search | Martech Zone
Etu ịzụrụ ngalaba aha
Monday, March 29, 2021 Tọzdee, Eprel 1, 2021 Douglas Karr
Ọ bụrụ n'ị na-achọ ịchọta ngalaba aha maka akara aka gị, azụmaahịa gị, ngwaahịa gị ma ọ bụ ọrụ gị, Namecheap na-enye nnukwu ọchụchọ maka ịchọta otu:
Chọta ngalaba na-amalite na $ 0.88
kwadoro site na Namecheap
Atụmatụ na Chohọrọ ngalaba Aha
Ndị a bụ echiche onwe m na ịhọrọ ngalaba aha:
Obere oge ka mma - nke dị mkpụmkpụ ngalaba gị, ọ ga - echefu echefu ma ọ dị mfe karịa iji gbalịa ịga ngalaba dị mkpụmkpụ. O di nwute, otutu ngalaba n'okpuru 6 odide ka edebeworo. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịchọta otu aha dị mkpụmkpụ, m ga-anwa idebe ọnụ ọgụgụ mkpụrụ okwu na okwu pere mpe karịa to ọzọ, iji gbalịa ichefu echefu. Dị ka ihe atụ, Highbridge a gafere ngalaba ọ bụla dị elu, mana anyị bụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka ndụmọdụ ka m nwee ike ịzụta abụọ Highbridgena-agba izu na highbridgemaka… ndụmọdụ ngalaba ogologo na ọtụtụ syllables, ma echefu echefu n'ihi na e nwere nanị okwu abụọ.
A nabatara TLD dị iche iche - Omume na-aga n'ihu ịgbanwe n'ihe gbasara ndị ọrụ na andntanetị na ojiji ha na ngalaba aha. Mgbe m họpụtara ngalaba .zone dị elu (TLD), ụfọdụ ndị gwara m ka m kpachara anya… na ọtụtụ ndị nwere ike ghara ịtụkwasị obi na TLD ma chee na m bụ ụfọdụ ụdị saịtị ọjọọ. Ahọrọ m ya n'ihi na achọrọ m martech dị ka ngalaba ahụ, mana ewerela TLD ndị ọzọ. Na ogologo oge, echere m na ọ bụ nnukwu ọpụpụ na okporo ụzọ m na-arị elu n'ihi ya ọ bara uru n'ihe egwu ahụ. Naanị buru n'uche na dịka mmadụ na-ede ngalaba na-enweghị TLD, enwere usoro ọ bụla iji gbalịa… ọ bụrụ na m pịnye ozi ọma wee banye banye, .com ga-abụ nnwale mbụ.
Zere hyphens - zere hyphens mgbe ị na-azụ ngalaba aha… ọ bụghị n'ihi na ha adịghị mma kama n'ihi na ndị mmadụ na-echefu ha. Ha ga-abanye na ngalaba gị mgbe niile na-enweghị ha ma yikarịrị ka ọ ga-enweta ndị ọjọọ.
Keywords - enwere njikọ dị iche iche nke nwere ike ịba uru maka azụmahịa gị:
Ọnọdụ - Ọ bụrụ na azụmahịa gị ga - abụ nke nwe obodo ma rụọ ọrụ mgbe niile, iji aha obodo gị n’aha nwere ike ịbụ nnukwu ụzọ iji mee ka ngalaba gị dị iche na ndị asọmpi gị.
Brand - Branddị na-aba uru ọ bụla iji rụọ ọrụ n'ihi na a na-asụpekarị ha iche, ọ gaghị enwekwa ike iwere ya.
Topical - Isiokwu bụ ụzọ ọzọ dị mma iji gosi ọdịiche dị n’etiti onwe gị, ọbụlagodi na akara ngosi siri ike. Enwere m obere aha ngalaba aha maka atụmatụ oru ngo n'ọdịnihu.
asụsụ - Ọ bụrụ na ewere okwu bekee, gbalịa iji asụsụ ndị ọzọ eme ihe. Iji okwu French ma ọ bụ Spanish na ngalaba aha gị nwere ike itinye pizazz na azụmaahịa azụmahịa gị niile.
Gịnị ma ọ bụrụ na gị na ngalaba na-?
Buzụta na ire ngalaba aha bụ azụmaahịa na-enye ego mana echeghị m na ọ bụ nnukwu ego ọ ga-adịte aka. Dika otutu TLDs na-adi, ohere ịzụta obere ngalaba na TLD ohuru na-akawanye mma. N'eziokwu, anaghị m eji ụfọdụ ngalaba m akpọrọ ihe otu oge m mere, m ga-ahapụ ha ka ha gaa maka pennies na dollar n'oge a.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị bụ azụmaahịa siri ike maka ịzụrụ ngalaba dị mkpụmkpụ nke eweregoro, ọtụtụ bụ maka ịgba ere na ire ere. Ndụmọdụ m bụ naanị inwe ndidi ma ghara ịla oke arahụ maka onyinye gị. Emeela m nkwekọrịta ịzụta ọtụtụ ngalaba maka nnukwu ụlọ ọrụ na-achọghị ka a mata ha wee nweta ha maka ọnụọgụ ego nke onye na-ere ahịa na-arịọ. M na-enyocha mgbe niile iji hụ ma ọ bụrụ na ha nwere ọwa mmekọrịta maka ha yana ịchekwa. Y’oburu n’inweta aha Twitter, Instagram, Facebook na aha otutu ndi ozo iji dakọtara na ngalaba gi, nke ahu bu ezigbo uzo iji dobe ahia!
Ngosipụta: Ngwaọrụ a na-eji NJ mgbakwunye m Namecheap.
Kedu ka mgbasa ozi si arụ ọrụ? Gịnị na-eme ka ndị mmadụ zụta?